मनोरन्जन – Page 68 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०३:०५ English
मेरो आँसुको श्राप लाग्नेछ :: रेजिना उपे्रती ३० असार २०७०, आईतवार १९:००
रेखाको यो कस्तो बिहे ? ३० असार २०७०, आईतवार १८:५४
काठमाडौ । अभिनेत्री रेखा थापा चर्चा, स्क्यान्डल र नेपाली चलचित्र परिपूरक जस्तै हुन्। प्रायः समाचारको शीर्षक बनिरहने अभिनेत्री थापा अहिले भने वृक्ष वरसँगको बिहेका कारण उनी फेरि चर्चामा छिन्। निर्माता छविराज ओझासँग पति–पत्नीको सम्बन्ध त्यागेकी रेखाले असार २६ हाँडीगाउँस्थित..
रहेनन् प्राण २९ असार २०७०, शनिबार ०८:२२
एजेन्सी । हिन्दी सिनेमाका विख्यात चरित्र अभिनेता प्राणको निधन भएको छ । ९३ वर्षीय प्राणको मुम्बईको लिलावती अस्पतालमा शुक्रबार साँझ निधन भएको हो । लामो समयदेखि बिरामी परेका उनलाई केही दिनअघिदेखि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । यसै वर्ष मात्र हिन्दी सिनेमा जगतको अत्यन्त सम्मानित..
सुगम र स्मृति बने मिस एण्ड मिस्टर एएनए २४ असार २०७०, सोमबार ०७:१५
न्यूयोर्क । एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका एएनएको न्यूयोर्कमा सम्पन्न मिस्टर एण्ड मिस १३ औं एएनए प्रतियोगितामा सुगम श्रेष्ठ र स्मृति श्रेष्ठले मिस्टर एण्ड मिस एएनएको उपाधि जितेका छन् । सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार साँझ न्यूयोर्कमा आयोजित प्रतियोगितामा १७ प्रतिस्पर्धीलाई..
कुरा मिले पनि मन चाहिँ फाट्यो :: रेजिना उप्रेती २२ असार २०७०, शनिबार १०:००
करिब डेढ दशकभन्दा अघिदेखि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय रेजिना उप्रेतीले यसबीचमा नाम पनि कमाइन् अनि बद्नाम पनि । तर, उनले यो क्षेत्र त्यागिनन् । घामपानी, दु:खसुख सहँदै अगाडि बढेकी रेजिनालाई अवसर पनि थुपै्र आएका थिए । उनको भनाइअनुसार विदेशमा बसेर डलर कमाउने अनि उतै घरजम पनि गर्न..
नायिका बन्ने धुनमा रिया भन्छिन्: ‘सेक्स इज नोथिङ’ १५ असार २०७०, शनिबार ०७:४५
बाँकेकी रिया श्रेष्ठ विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौंमा छिन् । कलेजको अध्ययनको क्रममा काठमाडौं आएकी उनी मोडलिङ र चलचित्र क्षेत्र दुवै विधामा यतिबेला सक्रिय छिन् । विशेष गरेर सिनेमाको पर्दामा नायिका भएर देखापर्ने उनको तीव्र इच्छा क्रमश: पूरा हुँदै छ । यसै क्रममा अभिमन्यू, राजु राजा राम र..
सुष्माले छाडेपछि सुदर्शन पूजातिर १२ असार २०७०, बुधबार ०१:४२
काठमाडौं। सुदर्शन थापा लभस्टोरी र संगीतप्रधान चलचित्र बनाउन खुबी राख्ने युवा निर्देशकमा परिचित छन्। ‘मेरो एउटा साथी छ’ चलचित्र निर्देशन गरेर चर्चामा आएका सुदर्शनलाई सोही चलचित्रले रजतपटमा स्थापित गराइदिएको हो। त्यसपछि उनले ‘के यो माया हो’ चलचित्र निर्देशन गरे। सो चलचित्रमा..
रेजिनाद्वारा पचास लाखमा धोकाधडी, निर्मात्री कविताको बेहाल १२ असार २०७०, बुधबार ०१:३९
काठमाडौं। केही समय अघिसम्म अंकमाल गर्दै हिंड्ने नायिका रेजिना उप्रेती र निर्मात्री कविता श्रेष्ठबीच अहिले काटमारकै अवस्था सिर्जना भएको छ। सिनेमा बनाएर आफूलाई फँसाएको भन्दै कविता निर्माता संघ र हनुमान ढोका प्रहरी परिसरको ढोका ढकढकाइरहेकी छिन्। रेजिना भने अहिले कमला श्रेष्ठसँग..
‘आई लभ सेक्स’ : सुमीना ५ असार २०७०, बुधबार ०९:५५
सुमिना घिमिरे, हेर्नमा जति सुन्दर छिन् विवादले पनि उनलाई त्यत्तिकै पछ्याउन थालेको छ । कहिले मिडियाकर्मीसँगको विवाद त कहिले आफैंले अभिनय गरेको फिल्मका निर्मातासँग भनाभन । यस्तै–यस्तै सकारात्मकभन्दा नकारात्मक व्यवहारका कारण ‘मनोरञ्जन बजार’मा छाइरहने सुमिनासँग भएको रोचक..
रेखाले बिहे नगरी सन्तान जन्माउने ४ असार २०७०, मंगलवार ०२:५८
काठमाडौं । नायिका रेखा थापाले जे गर्‍यो, त्यो चर्चाको विषय बन्ने गर्छ। सिनेमा क्षेत्रमा व्यस्त रहेका बेला उनका नाम चलेका नायकसागको हर्कतले चर्चा पाउने गर्थ्यो। तर केही समययता उनले चलचित्र पाउनै छाडेकी छन्। निर्माता निर्देशकले पत्याउन छाडेपछि उनले आफैं ब्यानर स्थापना गरी चलचित्र..
लगन जुरेको छैन:: दीपाश्री निरौला ३ असार २०७०, सोमबार ००:०३
टेलिभिजन कलाकर्मी मञ्चको आवश्यकता किन पर्‍यो? आफ्नो आवाज उठाउनका लागि। एक्लै बोल्दा हाम्रो देशमा कसैले सुन्दैन। त्यसकारण सबै मिलेर आवाज उठाउन लागि हाम्रो मञ्च बनेको हो। जसको यस पटक म अध्यक्ष चुनिएको छु। कति छन्, टेलिभिजन चलचित्रकर्मी? करिब तीन सय जति छौं। अध्यक्ष भएपछि के गर्ने..
कटि्रना-सलमान रोमान्स १ असार २०७०, शनिबार १९:२८
काठमाडौं। एकपटक घनिष्ट रुपमा प्रगाण बनेको प्रेम छुटेपछि पछि पानी बारबारनै भयो। निकै लामो समय त बोलचालनै भएन। एकले अर्कालाई शत्रु जस्तै माने। यो प्रेम थियो भारतीय नायक नायीका सलमान खान र कटि्रना कैफको विचित्र प्रेम। यस्तो सम्बन्धले उनीहरू र उनीहरूका नातागोता दुःखी हुनु त..
एसएलसी प्रिन्सेज २०१३ को ताज अमृता अधीकारीको सिरमा १ असार २०७०, शनिबार १९:२१
काठमाडौं । सिजन मिडियाले विगत ३ वर्ष देखि गदै आएको “काठमाडौं वर्षा एसएलसी प्रिन्सेज–२०१३” को अन्तिम प्रतिष्प्रर्धा जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न भएको छ । सहभागी ४४ जनालाइ पछि पादैप्रतियोगी नं ४२ अमृता अधीकारीले वाजीमारीन भने फष्ट रनरअप सलोनी भट्टराई प्रतियोगी नं. २५ ले..
अझै दुई–तीन वर्ष मेरै रजाइँ हुन्छ :: सुमिना घिमिरे, नायिका ३० जेष्ठ २०७०, बिहीबार २०:४८
थोरै समयमा धेरै सफलता पाएकी नायिका हुन्, सुमिना घिमिरे। तर, पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा उनी फसिरहेकी छिन्। पत्रकारलाई दुई टुक्रा पार्ने धम्की दिएको घटना सेलाउन नपाउँदै उनी फेरि अर्को विवादमा तानिएकी छिन्। प्राेमोसनमा साथ नदिएको र ढाँटेर हैरान बनाएको भन्दै सुमिनाको मुख्य..
मुक्तिनाथमा राजेशले झ्याइँ पार्ने ३० जेष्ठ २०७०, बिहीबार ०३:०३
काठमाडौं । महानायक राजेश हमालको बिहेको चर्चा विगत एक दशकदेखि हुँदै आएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन निकै गोप्य राखेका नायक हमालले आफ्नो सात वर्षे लामो पेम सम्बन्धबारे केही समय यता मात्र खुलासा गरे। उनको विहेको प्रसंग चल्दा, उनको नाम महिले कोमल वलीसँग त कहिले दिपाश्रीसँग जोडिन थालेपछि..
‘राती बसौं न’ पनि भन्छन् २९ जेष्ठ २०७०, बुधबार ११:५९
सोनिया शर्मा । काम थोरै तर चर्चा धेरै । एउटै चलचित्र एटीएमबाट चर्चामा आएकी सोनिया तस्बिर पनि निकै हट खिच्छिन् । अहिले केही चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहेकी सोनियालाई यो हप्ता एक कार्यक्रममा भेटियो । निकै ग्ल्यामर्स देखिएकी थिइन् उनी । ० तस्बिर त निकै हट खिचिएको रहेछ नि ? –..